MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA AUSTRALIA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Australia
A.Ch. Teraustralis Bradman
Liiska eeyaha Australia ee Terrier Mix Mix
'Aussie', sida lagu yaqaan kalgacalka, waa mid ka mid ah kuwa ugu yar kooxda Terrier. Terrier-ka Australia waa eey adag, lugo-gaaban, eey yar. Waxay leedahay madax dheer, oo leh taagnaan, dhegaha V-qaabeeya iyo indho madow oo mugdi ah lehna aragti qiiro leh. Sanka ayaa madow oo leh aag wareegsan oo V-u-rogan oo ka sarreeya. Ilkaha way fiican yihiin waana inay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Jidhku waxyar ayuu ka dheer yahay sida uu u dheer yahay oo leh dusha sare. Laabta ayaa qoto dheer, si fiican u fadhiisata jirka hoostiisa. Cagaha way yar yahiin oo bisadda ayay u eg yihiin. Suulasha waa la qaloocsan yahay oo isafgarad leh, oo si fiican loo xardhay oo aan u jeedin gudaha iyo dibaddaba. Ciddiyaha ayaa madow. Marka eey Aussi ah ay dhowr maalmood jirsato caws-ka-soo-saarista ayaa badanaa la saaraa. Terrier-ka Australia wuxuu leeyahay jaakad laba jibbaaran oo aan cimilo lahayn oo dhererkeedu dhan yahay 2-3 inji (5-6.5 cm). Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah buluug iyo cagaar, bacaad adag iyo casaan adag. Hooska buluugga ah waxaa ka mid ah buluug mugdi ah, bir-buluug, buluug buluug mugdi ah ama qalin-buluug ah. Lacagta-buluugga, timo kasta waxay wadataa buluug iyo qalin isku beddelaya midabka madow ee talooyinka. Waxaa jira dusha sare oo daboolaya kaliya sare ee dhakada, oo leh muuqaal jilicsan oo jilicsan inta ka hartay jaakada inteeda kale.
Terrier-ka Australia waa shaqsiyad yar oo jilicsan oo geesinimo leh oo dadka xusuusisa eey aad u weyn. Waxay leedahay tamar aan xad lahayn waana mid aad u daacad ah, oo muujinaysa kalgacal weyn oo ay u hayso qoyskeeda ugu dhow. Caqligeeda aan caadiga ahayn wuxuu ka dhigayaa wehel wax ka qabta oo aad u ilaaliya. Waa eey digtoon, maad iyo jacayl yar ah. Ruux, xiiso leh, iyo isku kalsoon, waxay leedahay maqal iyo indho fiiqis aad u xeel dheer, samaynta ilaaliye aad u fiican. Waxay rabtaa inay ka farxiso sayidkeeda waana ka sahlantahay adeecida loo tababaray marka loo eego kuwa kale ee badan. Noocani ma aha mid la xardhay. Waxay jeceshahay inay ciyo, waana in loo sheegaa marka ugu horreysa ee ay wax kugu wargeliso, waa ku filan tahay, dib uma ciyi doonto. Terrier-ka Australiyaanka ah ee hogaamiya bini'aadamka ayaa laga yaabaa inuu ku dhufto carruurta. Carruurtu waxay u baahan yihiin in la baro sida loogu naxariisto eeyga, laakiin sidoo kale sida loo noqdo hoggaamiyaha eeyga. Waxay saaxiibtinimo la leeyihiin eeyaha kale iyo sidoo kale xayawaanka kale. Si kastaba ha noqotee waxaa laga yaabaa inay ku eryan karaan xayawaanka yaryar banaanka guriga waana inay ku jiraan meel amaan ah markasta. Si wanaagsan u xiriir bulsho. Tani waa eey wanaagsan oo lala safri karo. Tababbarka Terrier-ka Australia wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid adag maxaa yeelay eeygan isku kalsoon ayaa doorbidaya inuu raaco fikradaha u gaarka ah, in kasta oo uu dhaqso wax u barto. Terrier-ka Australia waa nooc dhaqaale ahaan aad u quudiso. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka , oo ay la socdaan arrimaha dhuleed. Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka: 9 - 11 inji (23 - 28 cm)
Miisaanka: 9 - 14 rodol (4 - 6 kg)
Guud ahaan caafimaad.
Terrier-ka Australia wuxuu ku fiican yahay ku noolaanshaha guryaha. Guriga dhexdiisa si firfircoon ayuu uga shaqeeyaa waxna wuu tarayaa iyada oo aan dayrka la helin iyadoo la raacayo socod ku socda leedhka. Looma oggola inay dhex mushaaxaan maxaa yeelay waxay u janjeeraan inay eryan karaan.
Terrier-ka Australia waa eey yar oo la qabsan karo oo u baahan in lagu qaado a socod maalinle ah . Waxay ku raaxaystaan ​​fursad ay ku ciyaaraan oo ay ugu ciyaaraan aag aamin ah.
Qiyaastii 15 sano ama ka badan
Celcelis ahaan 4 eeyo
Koodhka adag, dheer, shagagga leh way fududahay in la daryeelo umana baahna jarid. Si fudud u cadayo dhowr jeer usbuucii, adigoo u jilicsan dharka hoose ee jilicsan. Cadayashada waxay kicisaa saliidaha dabiiciga ah waxayna mar dhow keeni doontaa jaakad dhalaalaysa. Sababtoo ah jaangooyada noocyadu waa jaakad adag, ha ku maydhin terrier-ka inta badan wax ka badan illaa hal jeer bishii ayaa ka dhigi doonta jaakadda dharka. Koodhka waa in la cadayaa inta uu qallalayo. Hubso inaad ku yareyso hareeraha indhaha iyo dhegaha, haddii loo baahdo, maqas aan afka lahayn. Waxay sidoo kale u baahan tahay ka gurid saddexdii biloodba mar. Cidiyaha waa in si joogto ah loo jarjaraa. Terrier-ka Australia wuxuu daadiyaa timo yar.
Waxaa lagu horumariyey Australia iyo mid ka mid ah kuwa ugu yar ee ka shaqeynaya, Terrier-ka Australia waxaa markii ugu horreysay loo muujiyey inuu yahay Terrier-ka Australiyaanka ah ee Qallafsan-Coated 1898 ee Melbourne, Australia. Si rasmi ah ayaa loo aqoonsaday 1933, noocyada waxaa loo abuuray iyada oo laga gudbayo noocyo badan oo cabsi leh oo ay ku jiraan Irish, Cairn Terrier , Norwich Terrier , Dandie Dinmont Terrier , Yorkshire Terrier , iyo Skye Terriers . Waxaa loo adeegsaday jiirka iyo xakamaynta masaska, sida waardiye, iyo xitaa adhijir iyo wehel. Terrier-ka Australia wuxuu ahaa noocii ugu horeeyey ee loo aqoonsado inuu u dhashay Australia 1868. Markii ugu horaysay waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1960. Qaar ka mid ah hibooyinka Australian Terrier-ka waa ilaalin, dabagal, xamaasad iyo sameynta tabaha.
ATCSA = Naadiga Australia ee Terrier Club ee Koonfurta Australia
Jonty Terrier-ka Australia 7 bilood
Lahaanshaha sawirka David Hancock
Scarlett The Australian Terrier sida eey qaangaar ah
Winston's 'Roux' ee Glen Eyre eey Australian Terrier ah
Eeg tusaalooyin badan oo Terrier-ka Australia
Australian Terrier Sawirada 1
Ey yaryar oo yaryar oo iib ah
bichon a muqisho ranian for sale
xoolaha Australia CORGI isku darka eey
soomaali bulldog basset hound mix puppy puppy for sale
shaybaarka madow isku darka shaybaarka huruud
1 sano jir rumaani ah iib ah